Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. अमेरिकाको लोभ देखाएर लेबनान – Emountain TV
काठमाडौँ, २९ फागुन । आकर्षक पारिश्रमिक र अमेरिका जान पाउने लोभ देखाएर पछिल्लो समय नेपाली महिलालाई लेबनान पुर्‍याउने क्रम बढेको छ । जबकि लेबनानमा कार्यरत महिला भने अध्यागमनमा जरिवाना तिरेर भए पनि स्वदेश फर्कन खोजिरहेका छन् ।
लेबनान पुग्ने नेपाली महिला कामदारले भनेजस्तो सजिलो काम नपाउने मात्र होइन, चरम यातनासमेत भोग्ने गरेको बताइन्छ । लेबनानसमेत हेर्ने इजिप्टस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार अवैध रूपमा त्यहाँ पुग्ने नेपाली कामदारलाई स्वदेश फर्कन पनि सजिलो छैन । अध्यागमन शुल्क बुझाएर मात्र पनि फर्किन सकिँदैन, लामो कागजी झन्झट पूरा गरेर चर्को शुल्क बुझाउनुपर्छ । ‘नेपाली महिलाका लागि लेबनान न काम गर्न सहज छ न फर्किन नै,’ दूतावासका एक अधिकारीले भने ।
दूतावासले फिर्ता पठाएका पीडितको बयान र उजुरीका आधारमा मानव तस्करीमा संलग्नलाई तत्काल कारबाही गर्न र जनचेतना फैलाउनसमेत उनले सरकारलाई सुझाएका छन् । जनचेतनाको कमीले पनि यस्ताको लोभमा नेपाली महिला पर्ने गरेको उनको भनाइ छ । लेबनान अमेरिकी प्रभाव रहेको मुलुक भएको र त्यहाँ नेपाली शान्ति सेना खटिएको भन्दै मानव तस्करले कामदार लैजाने गरेका छन् । शान्ति सेना भएका कारण समस्या नपर्ने र पछि अमेरिका जानसमेत सहज हुने झूटो आश्वासन दिएर घरेलु कामदारका रूपमानेपाली महिला त्यहाँ पुर्‍याउने गरिएको छ । कतिपयलाई युरोप लैजाने भनेर पनि त्यहाँ पुर्‍याइएको जानकारी आएको पनि दूतावासले उल्लेख गरेको छ ।
राजदूत अर्यालका अनुसार लेबनानबाट पछिल्लो तीन महिनामा दुई पटक गरी १७ नेपाली महिलाको उद्धार गरिसकिएको छ । काठमाडौं विमानस्थलबाट अर्कै मुलुक पुर्‍याई त्यहाँबाट लेबनान लैजाने काम भइरहेको जानकारी दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पठाएको छ । लेबनानमा ८ सय ७२ नेपाली सैनिक शान्ति मिसनमा छन् । लामो समयदेखि लेबनानमा अवैध रूपमा बस्दै आएका ६ नेपाली महिलालाई आइतबार काठमाडौं पठाइएको पनि दूतावासले जनाएको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा यस्तो खवर छ ।